စိတ်ကူးပျော်ရာ: အမျိုးသားတို့၏ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းများ
အား သဇင် ရေးသားပါသည် ဇန္န၀ါရီ 1, 2012 at 11:01am
ယနေ့ခေတ် ဖက်ရှင်ရေစီးသည် အဆန်းတကြယ် ဒီဇိုင်းများဖြင့် ပိုမိုများပြား ရှုတ်ထွေးလာပေရာ အသစ်အသစ်သော ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းများ ပေါ်ထွက်လာသကဲ့သို့ အမျိုးသမီး ဖက်ရှင်နှင့် အမျိုးသား ဖက်ရှင်တို့အကြား ခြားနားမှု တံတိုင်းသည် တစ်ဖြည်းဖြည်း ပါးလွှာ လာလျက်ရှိသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပိုမိုနေရာရလာကာ အမျိုးသားတို့နှင့် တန်းတူ လှုပ်ရှား သွားလာနိုင်ကြသည့် အလျောက် ရှေးယခင်က မိန်းမဆန်ဆန် နှင့် သိမ်မွေ့အောင် တုတ်နှောင်ထားသည့် ဖက်ရှင်ပုံစံများထက် ပိုမိုသွက်လက်သော အမျိုးသားဆန်သည့် ဖက်ရှင်များကို ဝတ်ဆင်လာကြသည်။
ထိုအတူ ယနေ့ခေတ်တွင် အမျိုးသားတို့သည်လည်း ယခင်ကာလများထက် ပိုမို၍ အလှအပ နှင့် ဖက်ရှင်အပေါ် ဂရုစိုက်ကြသည် ဖြစ်ရာ ပုံမှန်ဝတ်နေကျ အမျိုးသား ဖက်ရှင်များမှ ခွဲထွက်ပြီး အရောင် အသွေးနှင့် ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်သည့် အပြင်အဆင် နှင့် ဖက်ရှင်ပုံစံ အများအပြား ပေါ်ထွက်လာသည်။ ထိုသို့သော ပေါ်ထွက်လာသည့် ဖက်ရှင်များတွင် အမျိုးသမီးဆန်သည့် အဆင်အသွေး ဒီဇိုင်း ပုံစံနှင့် ဝတ်စား ပြင်ဆင်ပုံများသည်လည်း ယနေ့ခေတ် အမျိုးသား ဖက်ရှင် ရေစီးတွင် အရှိန်အဟုန် ကောင်းစွာ စီးမျောလာကြသည်။
ထိုသို့သော အမျိုးသားတို့၏ အမျိုးသမီး ဆန်ဆန် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း အများစုကို ဖြူသွယ်သော မျက်နှာတည်ဆောက်ပုံနှင့် နုနယ်သော ရုပ်ရည်များ ပိုင်ဆိုင်ကြသည့် အာရှ အရှေ့ပိုင်းနိုင်ငံများဖြစ်သော ဂျပန် ၊ ကိုရီးယား ၊ တရုတ် ၊ ဟောင်ကောင်၊ တိုင်ဝမ် နှင့် ထိုင်း စသော နိုင်ငံများရှိ အမျိုးသားများ အကြားတွင် အထူးခေတ်စားသည်ကို မြင်တွေ့ကြရသည်။
အထူးသဖြင့် ထိုနိုင်ငံများရှိ ရုပ်ရှင် ဂီတ နယ်ပယ်မှ ကျော်ကြားသူ အမျိုးသား အများစုသည် ဖက်ရှင် အဆန်းတကျယ်များ တီထွင်ကြရာမှ အဆိုပါ ဖက်ရှင်ရေးစီးသည် လူငယ်အများစုထံသို့ စီးဆင်းသွားဖွယ်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ အမျိုးသားတို့အကြား ခေတ်စားလာသော အမျိုးသမီး ဆန်သည့် ဖက်ရှင်များထဲမှ ကျော်ကြားသူ အာရှ အမျိုးသား အချို့၏ အမျိုးသမီး ဆန်ဆန် ဆံပင်ပုံစံများကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
Max Changmin from TVXQ
Lee Hong Ki from F.T Island
Lee Teuk from Super Junior
Bae Yong Joon and Rain
Kim Hee Chul from Super Junior
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 1/01/2012 02:45:00 AM
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံက ကြံကြံဖန်ဖန် အိမ်သာစတိုင်လ် စားသေ...
Volkswagen ၏ အံ့ဖွယ်ကားပြခန်း
Twitter မှာ ဗန်းစကားသုံးမိသူ ပြည်ဝင်ခွင့်မရ
မဟနသာ မရှိတော့ရင် မိခင်လောင်းများအတွက် စိတ်လေးစရာ....
ဗန်းမောက်မြို့ နယ်က ရွှေတွင်းများအကြောင်း တစ်စေ့တစ်...
ချစ်စရာ ကြောင်ကလေးများ၏ အလန်းဆုံးဖက်ရှင်
မြိတ်မြို့ မှ ရုခင်းပုံများ
ခွဲစိတ်ကုသရန်လိုအပ်နေသော ကလေးငယ်လေးအား ၀ိုင်းဝန်းက...
မလေးရှား မှ ကြောက်စရာ အပြစ်ပေးနည်းစနစ်
သိန်းနဲ့ ချီတဲ့ လူထုကြီးကို မြင်ဘူးချင်တယ်ဆိုရင် (...
တရုတ်နိုင်ငံမှ အမျိူးသမီး ကိုယ်ရံတော်၊ သက်တော်စောင...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခင်ပွန်း မိုက်ကယ်အဲရစ်၏ စွန့် လွ...
အမြင် ဆန်းလေး နဲ့ လှနေတဲ့ ဖိနပ် ဒီဇိုင်းများ
ကမ္ဘာကျော်တို့၏ အလှအပဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်များ
၅၀၀၀တန်ဖုန်း ကိစ္စ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ဒီလိုဒီလိုြေ...
ကမ္ဘာပေါ်မှ အထူးခြားဆုံး စေတီပုထိုး ဘုရားများ (ရွှေတိ...
Android Phone တွင် မြန်မာ Keyboard သွင်းနည်းနှင့် ...
တောင်ကြီးသားများ ၏ တန်ဆောင်တိုင် !
တ တာ တ (ရယ်စရာ)
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ ဘာသာရေးအြ...
အန္တရာယ် ရှိတဲ့ နှလုံးရောဂါ ဆေးမှားယွင်းဖြန့်ဝေမှုေ...
လူအား စက်အားနဲ့ ပြင်ရတဲ့ စာလုံးပေါင်းအမှား
ဟာသ ကာတွန်း စုစည်းမှု
ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှ ဓမ္မကထိကခေါ်ထိုက်သလဲ ? ဘယ်လိုပုဂ္ဂို...
မြန်မာဓလေ့ နေထိုင်ပြုမှုပုံများအား နိုင်ငံခြားသားမျ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည့် ဂုဏ်ပြုဆ...
ချစ်သူရဲ့ ရုပ်အလောင်းနဲ့ လက်ထပ်သူ
ဆူးလေစေတီတော် ရာပြည့်ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော် စည်ကားစွာကျ...
ဂျပန်နိုင်ငံက အကျဉ်းထောင်တစ်ခု၏ ပုံတွေ
အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများပြောသော လှပမှုဆိုင်ရာ လှ...
ပိုင်းေ လာ့ဆရာတော်ကြီး ၏ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း
ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးပြစ်မှားလျင် သင့်တတ်သော ဒဏ်ဆယ်ပါ...
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ သွားတော် အကြောင်း
Web Address တွေကို ခေါင်းရှုပ်ခံပြီး စာအုပ်ထဲမှာ မ...
ဦးခင်ညွန့် အလုပ်ရပြီ မြရိပ်ညို ဖေါင်ဒေးရှင်း နာယက...
ပြည်တွင်းပြည်ပ မြန်မာအလုပ်သမားများ အတွက် အလုပ်သမား...
ကွမ်းစားရာ၌ ထည့်စားသော ဆေးအချို့ကြောင့် နောက်ဆက်တွ...
လှပဆန်းပြား ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်များ (ကောင်မလေးတွေမလွတ်...